यी अभिनेत्रीलाई चुम्बन गर्दा नर्भस हुने गर्थे चुम्बन किंग इमरान हाशमी, कारण थियो फिल्मको निर्माता नै बिद्याका पति थिए – OSNepal
यी अभिनेत्रीलाई चुम्बन गर्दा नर्भस हुने गर्थे चुम्बन किंग इमरान हाशमी, कारण थियो फिल्मको निर्माता नै बिद्याका पति थिए
बलिउड अभिनेता इमरान हाशमी आफ्नो अभिनयका साथसाथै किसिङ दृश्यका लागि पनि परिचित छन् । उनी इन्डस्ट्रीमा सिरियल किसरको रुपमा चिनिन्छन् । उनका लगभग हरेक फिल्म निकै बोल्ड छन् । जब उनले पर्दामा किसिङ सीन गर्छन्, उनी पर्दामा निकै सहज देखिन्छन् । तर, पर्दा पछाडिको कथा हरेक पटक एउटै हुँदैन ।
यो आवश्यक छैन कि तिनीहरू प्रत्येक पटक पर्दा पछाडि जस्तै सहज छन्। हरेक फिल्ममा उनको विपरित नयाँ नायिका हुन्छन् र हरेक पटक त्यो नयाँ अभिनेत्रीसँग अनुकुल हुन सहज छैन । इमरान हाशमीसँग फिल्म ‘घनचक्कर’ को सेटमा पनि यस्तै भएको थियो । यस फिल्ममा इमरान हाशमीको अपोजिट अभिनेत्री विद्या बालन थिइन् ।
दुवैले फिल्म ‘घनचक्कर’ मा धेरै किसिङ सीन दिएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार विद्यासँग किसिङ सीन दिएपछि इमरान समस्यामा परेका थिए । नेहा धुपियाको च्याट शो ‘नो फिल्टर’ मा अभिनेत्री विद्या बालनले नै यसको खुलासा गरेकी हुन् । शोमा अभिनेत्रीले इमरान हरेक किसिङ दृश्यपछि तनावमा हुने गरेको बताइन् । उनले भनेकी छिन् कि म अचम्ममा परे पनि उसले मलाई सधैं किन यस्तो प्रश्न सोध्छ।
वास्तवमा, उनको समस्याको कारण विद्याका पति र फिल्ममेकर सिद्धार्थ रोय कपुर थिए। किसिङ सीनपछि इमरानले विद्यालाई भन्ने गर्थे सिद्धार्थले के भन्लान ? उनले फेरी सोध्थे – यति गरेपछि के मलाई मेरो पेमेन्ट चेक उनले देलान जस्तो लाग्छ ? किनभने फिल्म ‘घनचक्कर’का निर्माता विद्या बालनका पति सिद्धार्थ रोय कपुर नै थिए । त्यसैले इमरान लाई अफ्ठ्यारो लागेको थियो ।